Moya China Cotton Bud umzi-mveliso kunye nababoneleli |Zhongxing
1. Ukusetyenziswa kwezinto ezikhuselekileyo zokusingqongileyo, ezikhuselekileyo kunye ne-nontoxic, ngokukodwa ezifanelekileyo kwishishini le-IT ye-elektroniki, musa ukuwa uthuli, intloko yekotoni ayichithwanga, umgangatho obalaseleyo.
2. Isixhobo esinezinto ezininzi zokucoca, ukucacisa, kunye nokusebenzisa ipeyinti, iglu, i-epoxy, i-lubrication, njl.
3. Ilungele ukwenza i-makeup esisigxina, izithambiso, okanye enye imodeli yokwenza, i-ceramics, ubucwebe,imihlobiso ilaphu, ukuzonwabisa.
4.Iintloko zomqhaphu kuzo zombini iziphelo zibambene ngokusondeleyo kunye ne-cotton swabs, ngoko ayiyi kuwa, ungayisebenzisa ngokuzithemba.
5. I-cotton swab inobude obufanelekileyo kunye nobubanzi, obulungele kwaye busebenzise ngokukhawuleza.
6.Sebenzisa izinto ezahlukeneyo zohlobo, akukho kukhanya okukhanyayo, iingxowa zokupakisha ezizimeleyo ezicacileyo, unokubona ngokucacileyo ukuthungwa kwe-cotton swabs, kwaye unokutywinwa kwaye ugcinwe emva kokusetyenziswa ukukhusela uthuli, ukucoceka kunye nokucoceka.
Iiswabs zomqhaphu kunye nebhokisi ye-biodegradable 200pcs / ibhokisi
UFUMANA NJANI AMAXABISO NEESAMPULI
Qhagamshelana nam ngobukhulu kunye nobungakanani obufunayo, iisampuli zikhululekile (i-1 okanye i-2 pc) kwizinto ezincinci kodwa ukuthunyelwa akukho.Sinokwamkela i-akhawunti ecacileyo.
Ngokuqhelekileyo sicaphula ngeyure enye.Ukuba ukhona
kungxamiseke kakhulu, ndicela undifowunele nanini na.
OEM & ODM SENKONZO
Yamkelwe kakhulu kwi-OEM kunye ne-ODM.
Ngaphezulu kwamava ama-10 eminyaka kulo mgca, sinokukunceda ukwenza ipakethe yakho,
uphawu, umbala, isitayile, ubungakanani.
INTLAWULO & IXESHA LOKUNIKEZELWA
Western Union, Pay pal, T/T, L/C, njalo njalo.
Ukuhanjiswa Kuxhomekeke kubuninzi kunye nemfuno ekhethekileyo .Ngokuqhelekileyo Iisampuli ziyi-2-3 iintsuku.Ukuveliswa kwe-Mess iintsuku eziyi-15-25.
SINGAYIQALISA NJANI UKU-odola?
1.Uthumela umbuzo kunye nemfuno, sithetha ngeenkcukacha nge-imeyile okanye nge-skype / whatsapp.
2.Emva kobuninzi, umbala, iphakheji, ixabiso, imfuno ekhethekileyo iqinisekisiwe, ndiya kuthumela i-invoyisi yeProma.
3.Qinisekisa i-invoyisi kwaye ulungiselele intlawulo.
4.Emva kokufumana intlawulo, siya kulungiselela imveliso, ukuba sinempahla, siya kulungiselela ukuhanjiswa.
Nceda ushiye umyalezo wakho okanye uqhagamshelane nam ngokuthe ngqo ngeFowuni / whatsapp / wechat, ndiza kuphendula ngexesha.
I-Eco Ear yokuCoca iiBuds zeBamboo/Intonga yoMkhuni yeMakeup Swab
100% umqhaphu ococekileyo
I-100pcs / ibhokisi lephepha
Indlebe yokucoca i-cotton buds
Ukupakisha ngomatshini ozenzekelayo
Umvelisi we-cotton buds e-China
Ngaphambili: Amaqhuma eCotton Bud iMveliso eNtsha yeCotton Bud 200pcs biodegradable Cotton Swab
Okulandelayo: Imaski yobuso bezonyango
IiNqaku zoMqhaphu eziNdlongo
Iimaski ezi-3 eziLahlwayo ngeFda, Umsebenzi Wemaski, Mask Njengobuso, Ffp1 Imaski elahlayo, 3 Gcoba iMaski yoBuso eLahliweyo, Ukulahlwa kweHalf Mask Respirator,